विपी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिविरुद्ध सवा करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा « Pahilo News
विपी प्रतिष्ठानका उपकुलपतिविरुद्ध सवा करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा
प्रकाशित मिति :5August, 2019 6:47 am
काठमाडौं,२० साउन । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारविरुद्ध आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ करोड २८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । होस्टेल र फार्मेसी भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग पटक-पटक गरी उक्त रकम घुस लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
रौनियारले होष्टेल र फार्मेसी भवनका ठेकेदारसँग मोविलाइजेसन र रनिङ विलको भुक्तानी दिँदा घुस लिएको अडियोसहित अख्तियारमा उजुरी परेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदिप कोइरालाले जानकारी दिए । लेनदेनमा चालक दिवाकर कार्कीलाई प्रयोग गरेको खुलेको छ । दिवाकरलाई भने अख्तियारले साक्षीका रुपमा प्रयोग गरी सजायाबाट छुट दिएको जनाएको छ ।
पटक-पटक गरी एक करोड ६ लाख रुपैयाँ रौनियारलाई चालक कार्कीले बुझाएको प्रमाण भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । घुस लेनदेनमा प्रत्यक्ष संलग्न भए पनि अख्तियारलाई सहयोग गरेको भन्दै कार्कीलाई सजायबाट छुट गरेको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भवन निर्माणको चौथो रनिङ बिल भुक्तानीका लागि ठेकदार कम्पनीका झालाई बोलाई ८ लाख रुपैयाँ घुस मागेको सूचना पाएपछि अख्तियार टोलीले गत असार २६ मा रौनियार र प्रतिष्ठानमै हाउस अफिरको रुपमा कार्यरत उनका भतिजा डा. रामहरि रौनियारलाई घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।
राैनियारका भतिजा रामहरिविरुद्ध ८ लाख रुपैयाँ विगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए । अख्तियारले उनलाई मतियारको रुपमा मुद्दा चलाएको छ ।नयाँपत्रिकाबाट